ZANU- PF Archives - Nile Post
Home Tag ZANU- PF
Tag: ZANU- PF
Zimbabwe's main opposition party will this week hold a mock inauguration to name its leader Nelson Chamisa as the country's president, highlighting its claims the July 30 election was rigged. ...
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa has ruled out forming a coalition government, despite his narrow win in last week's presidential election. The opposition is gearing up to challenge the official results ...
The Zimbabwe Lawyers for Human Rights (ZLHR) says the government has intensified its crackdown on opposition political party supporters after arresting more people following protests staged in Harare after the ...
Zimbabwe's ruling ZANU-PF party has won a majority in parliament, according to partial results released Wednesday. The figures from the Zimbabwe Electoral Commission showed ZANU-PF with 109 seats in the ...
Observers face tough test in Zimbabwe poll
In Nyatsime village outside Harare, European Union election observers go from home to home collecting detailed survey answers - their first mission to Zimbabwe for 16 years since being abruptly ...
A survey conducted by the Zimbabwe Democracy Initiative (ZDI) shows that some members of the Zimbabwe Defence Forces have already been deployed in the country’s rural areas and there are ...
The Zimbabwe Defence Forces (ZDF) has described as malicious and baseless press reports that it will rig the country’s forthcoming general elections in favour or the ruling Zanu PF party. ...
Zimbabwean President Emmerson Mnangagwa on Saturday afternoon survived a blast at a ruling ZANU-PF party rally. According to reports, an explosion rocked White City Stadium in Bulawayo where Mnangagwa was ...